Famantarana voalohany ny mpandimby ny OnePlus 3T | Vaovao momba ny gadget
Rehefa miresaka momba ny OnePlus ianao dia mila manao tadidy kely ary miverina amin'ny fiandohany. Ary tsy milaza an'izany aho mba hahatsapantsika fa nihatsara ny orinasan'ny orinasa sinoa niaraka tamin'ny vokatra vokariny - izay koa- saingy tamin'ny voalohany dia maro no tsy nanome roa dolara ho azy ireo noho ny politikan'ny vidiny ambany izay natombok'izy ireo ary androany dia afaka milaza fa izy ireo no safidy mifaninana indrindra amin'ny fitaovana antonony. Mazava fa anisan'ny tompon'andraikitra amin'izany rehetra izany ny asa tsara nataon'ny OnePlus hatramin'izao, ny fitaovany farany ny OnePlus 3T dia tena mahavariana mihevitra ny sandan'ny vola ary ankehitriny ny tsaho momba ny maodely vaovao amin'ity taona ity dia tonga amin'ny tambajotra ...
Ao amin'ny fitaovan'ny marika sinoa dia nahatratra 6GB RAM tao amin'ny fitaovany ity dia zavatra iray izay toa tsy misy te hiady ireo manampy lehibe RAM. Amin'ity tranga ity dia manana ahiahy isika raha hanohy hampitombo io isa io ny orinasa, na dia efa nisy aza ny mpanamboatra sasany nampitandrina fa tsy ilaina ny manana ireo 6GB RAM ireo satria tsy manararaotra azy ireo ny rafitra miasa. Na ahoana na ahoana, ny OnePlus 3T amin'izao fotoana izao dia manana processeur quad-core Kryo 2 amin'ny 2.35 GHz, 2 amin'ny 1.6 GHz, miaraka amin'ny Adreno ™ 530 GPU, 6GB an'ny LPDDR4 RAM, fitehirizana 64GB / 128GB UFS 2.0 ary karazana sensor rehetra: ny sensor an'ny dian-tànana, sensor amin'ny Hall, accelerometer, gyroscope, sensor akaiky, sensor light ambient ary kompas elektronika.
Ho an'ity kinova manaraka ity dia azoko ampiana ny processeur vaovao Qualcomm Snapdragon 835, mahatratra RAM 8 GB ary angamba ny fakan-tsary indroa any aoriana, saingy ity dia zavatra iray mijanona amin'ny tsaho voalohany niseho ary tsy maintsy tohizantsika ny mahita. Mikasika ny volavolain'ity taranaka manaraka ity ao amin'ny OnePlus, dia toa tsy te handrahona be loatra ilay orinasa fa hita miharihary fa raha manova ny endrika izy ireo dia ho lasa tsara kokoa satria ny orinasa dia nahavita tsara hatramin'ny modely voalohany. natomboka. Amin'ny fitsipika dia tokony hantsoina hoe OnePlus 4 izy io, saingy tsy mazava raha io no anarany. Amin'ity fahavaratra ity na kely aza alohan'ny hametrahantsika fisalasalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Famantarana voalohany momba ny mpandimby ny OnePlus 3T
Ahoana ny famoahana maimaim-poana Windows 10, 8.1 ary 7 amin'ny endrika ISO